EURO 2020 – Garsoore Sports
Kubbadsameeyaha Aston Villa ayaa lagu eedeeyay inuu iska indho tiray mas’uuliyadiisa maadaama uu yahay ciyaaryahan weyn, laakiin waxa uu sheegay in go’aanka uu ahaa mid isaga ka baxsan. Jack Grealish ayaa si kulul uga hadlay…
Habeen ay ka buuxaan xiisad iyo rajo, Talyaanigu wuxuu hantay horyaalkiisii ugu horreeyay ee ugu weynaa muddo 53 sanno ah markii rigoorayaal uu uga adkaaday Ingiriiska finalkii Euro 2020 ee ka dhacay garoonka Wembley ee…
Ra’iisal wasaaraha Ingiriiska Boris Johnson ayaa wajahaya cadaadis sii kordhaya oo ku aaddan inuu fasax siiyo shaqaalaha haddii xulka kubbada-cagta ee saddexda libaax ay Talyaaniga ku garaacaan garoonka Wembley habeenka axadda. Jamaahiirta Ingiriiska ayaa billaabay…
UEFA Oo Ganaaxday Xulka Ingiriiska Kahor Fiinaalka Euro 2020
Xulka kubbada-cagta Ingiriiska ayaa ganaax la kulmay kaddib kulankii semi-finalka Euro 2020 oo ay la cayaareen xulka Denmark. Saddexda Libaax ayaa ganaax lacageed oo gaaraya €30,000 ay kusoo rogtay hay’adda cayaaraha Yurub ee UEFA oo…
Foden Oo Sabab Layaab Leh Looga Saaray Tababarkii Xulka Ingiriiska Kahor Fiinaalka Euro 2020
Phil Foden tababar lama qaadanin inta kale ee xulkiisa Ingiriiska maanta oo sabti ah iyadoo xiddigan tababarka looga reebay sabab layaab leh. Waxay ahayd tababar muhiim u ah xulka kahor fiinaalka Euro 2020, laakiin cayaaryahanka…
UEFA ayaa shaacisay in Bjorn Kuipers uu dhex dhexaadin doono kulanka finalka Euro 2020 ee Axadda dhexmari doona Ingiriiska iyo Talyaaniga kana dhici doona garoonka Weobley. Ciyaarta ayaa noqoneysa tii seddexaad ee Kuipers uu garsoore…
“Waxa Uu Ahaa Rigoore Aan Ahayn Rigoore”
Garab weerarka xulka kubbada-cagta Ingiriiska Raheem Sterling ayaa maanta heysta hadalheynta ugu badan ee kubbada-cagta kaddib markii lagu eedeeyay inuu is tuuray markii Ingiriiska lagu abaalmariyay rigooradii Harry Kane ee u sahashay in kaddib markii…
Ingiriiska Oo Iska Xaadirisay Fiinaalka Euro-ga
Harry Kane ayaa shabaqa soo taabtay kaddib markii rigoore laga badbaadiyay uu goosha la helay si uu u hubiyo in Ingiriiska ay wajahaan Talyaaniga finalka Euro 2020. Goolkii laadka xorta ahaa ee Damsgaard hoggaanka u…
Saka Oo Booska Kala Baxaya Sancho Kulanka Caawa Ee Denmark
Xiddiga Gunners ayaa dib loogu soo yeeray kaddib dhaawac canqowga ah oo kahor istaagtay inuu kusoo bilowdo kulankii quarter-finalka Saddexda Libaax oo ay guul ka gaareen xulka Ukraine. Gareth Southgate ayaa dib ugu soo celin…
Xulka kubbada-cagta Ingiriiska ayaa haatan isku diyaarinaya kulankooda weyn ee semi-finalka Euro 2020. Waxay noqon doontaa markii labaad ee isku xigta ee semi-finalka ay gaaraan kooxda uu hoggaaminayo macalin Gareth Southgate marka laga soo tago…